SAWIRO:- Qarax gaari ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoysyada Dabka iyo Sayidka ee magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaSAWIRO:- Qarax gaari ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoysyada Dabka iyo Sayidka ee magaalada Muqdisho
01/11/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Qarax ayaa ka dhacay Magaalada Muqdisho,kaasoo ahaa mid lagu xiray gaari Noociiso uu yahay Hilux oo la sheegay in uu lahaa shaqsi ka mid ah dowladda Soomaaliya.
Qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoysyada Dabka iyo Sayidka.
Sidda ay Warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal ma jirto qof wax ka noqday,maadaama gaariga Qarxay uu yaallay Meel Wadada dhinaceeda ah oo aysan jirin cid saarneyd.
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa soo gaaray goobta uu Qaraxu ka dhacay, waxaana damiyeen gaarigii Qarxay oo gubanaayay.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku badan gawaaridda lagu xiro waxyaabaha Qarxa, waxaana inta badan Mas’uuliyadda Qaraxyaddaasi sheegta xogaga Al-Shabaab.
DAAWO SAWIRO:- Maxkamada Ciidamada oo xukuntay rag dhac ka geystay magaalada Muqdisho